Warshadaha Macdanta - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Waxaa lagu soo saaray iska caabin heer sare ah, is-adkeysi iyo dab-daadin ka dib daaweyn qaas ah, sheyga caagga ah ee fiberglass-ka loo xoojiyay (FRP) waa mid ka mid ah qalabka ugu caansan ee wax soo saarka macdanta.
Qalabka FRP inta badan waxaa ka mid ah: Haamaha keydinta FRP, taangiyada xanniba, weelka, xoqista, xirmooyinka, korantada, tuubooyinka, degidda soo saarista, deganeyaasha boosteejada, korantada, xakameeyaha, gogol dhaafka, gunta, iyo taangiyada isku dhafka iwm. iyo cabirrada.
Marka la barbar dhigo birta, FRP ayaa ka fudud oo ka fiican caabbinta daxalka. Marka la barbar dhigo biraha caagga ah ee birta ka samaysan iyo alwaaxa, ayuu FRP si fiican ugu cad yahay saamigiisa waxqabadka ugu sarreeya.
Sidaa darteed qalabka macdanta 'FRP' waxaa si diirran u soo dhaweynaya warshado macdaneedyo badan sida macdanta naxaaska, macdanta uraniumka, qashin-qubka iyo warshadaha waraaqaha, iwm.
Xaraashka kaarboon ayaa loo adeegsan karaa dhaqdhaqaaqa korantada si loogu buuxiyo shuruudaha saxda ah ee macaamiisha. Waxyaabaha u adkaysanaya Abrasion sida Sic ayaa lagu dari karaa liner-ka si looga hortago burburka iyo burburka labadaba. Waxaa kale oo lagu dari karaa ujeedooyin adeeg oo kala duwan.
Marka laga reebo faa'iidooyinka kor ku xusan, halkan waxaan ku siin doonaa faa iidooyin faahfaahsan oo ku saabsan alaabooyinka Fiberglass caagga ah lagu xoojiyay (FRP):
- Caabuq heer sare ah oo iska caabbinta jirka ah: kama falcelin doonaan aashitada caadiga ah, alkali, cusbada, xalka, uumiga, iwm.
- Awood qaas ah oo sare: way ka fiican tahay waxyaalaha birta caadiga ah
- Dib u gurashada dabka iyo caabbinta heerkulka sare:
- Kulan fudud
- Qiimo jaban iyo adeeg cimri dheer
- Xayirnaanta wanaagsan: waxay ku sii hayn kartaa waxqabadka jilicsan xitaa xaddiga aad u sarreeya.
Qaar dhexdhexaad ah oo muhiim ah, waxsoosaar laba geesood ah ayaa loo isticmaali karaa, tusaale ahaan heerkulka sida PVC, CPVC, PVDF, PP waa liner-ka iyo fiberglass-ka waa qaab-dhismeedka, kaas oo isku dari kara waxqabadka ugu fiican ee liner-kaha ee heer-kulka waxqabadka iska caabinta burburka iyo xoogga sare ee FRP.
Jrain, iyada oo leh khibraddeeda hodanka ah iyo tayadeeda sare, waxay u fidisay qalab fara badan oo macdanta kaladuwan shirkado caalami ah oo aqoon fiican u leh, sida degganeyaasha, miisaska, quudinta cufnaanta qaro weyn, daboolida jiidaha, daboollada wareega weyn, taangiyada FRP iyo taangiyada labbiska.
Dhoolatus gacmeed, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Fiberlass-ka Farsamaysan, Caaryada, Mashiinka Dabaysha ee GRP,